Tsy hitsangana hiverina ny fizahan-tany- UNWTO, OMS, tsy nahomby ny EU, fa ... | Vaovao momba ny fizahantany
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Tsy hitsangana hiverina ny fizahan-tany- UNWTO, WHO, UE tsy nahomby, saingy…
Mila manangana rafitra multilateral vaovao hatrany ambany isika, biriky amin'ny biriky. Mila manangana rafitra tsy miankina amin'ny fitsipiky ny fananana sy ny tsy fananana isika. Ny dia dia ny fampifandraisana ny olona rehetra na aiza na aiza.
UNWTO sy ireo fikambanana iraisam-pirenena hafa tsy nahomby antsika ary tsy hihemotra ny fizahan-tany, hoy ny Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha.
Ny sehatry ny fitsangatsanganana dia, tsy isalasalana, fa iray amin'ireo sehatra voakasik'izany indrindra vokatry ny COVID-19. Mampalahelo fa ny fitondram-panjakana tsirairay avy dia miasa samirery manao izay heveriny fa tsara indrindra hiarovana ny mponina ao aminy. Antenaina sy takatra izany.
Ny ilaintsika dia rafitra multilatera vaovao, rafitra mirindra, ara-drariny ary ara-drariny kokoa, satria tsy zava-dehibe ny fahombiazan'ny firenena tsirairay samirery.
Dr. Taleb Rifai dia sekretera jeneraly maharitra roa an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany (UNWTO). Androany dia manao satroka maro i Dr. Rifai, ao anatin'izany ny birao sy mpiara-manorina ny Tambajotra fizahan-tany manerantany (WTN).
Hoy i Rifai: "Efatra taona lasa izay, nanana resadresaka nifanaovana tamin'ny tamba-jotra Portiogaly Workmedia Victor Jorge aho ary nanontaniana hoe ahoana no hamaritako ny fotoana amin'izao fotoana izao, izay misy ny fampihorohoroana, ny BREXIT, ary ny fifidianana ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump. Tamin'izany fotoana izany, tsy nisy nanampo ny krizy COVID sy ny fiantraikany eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany. ” Araka ny vinan'i Rifai, herintaona taty aoriana dia niverina ny fizahantany.
Nanazava i Dr. Rifai androany tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ity fantsom-baovao Portiogey ity ihany: "Mino aho fa fotoana iray mamaritra izany amin'ny tantaran'ny olombelona manontolo izao. Hiova ny zava-drehetra. Tsy hihemotra ny fizahantany.
“Androany, tsy hihemotra intsony isika, fa hiroso amin'ny tontolo vaovao, fenitra vaovao. Mety ho lasa tontolo tsara kokoa sy maharitra ity.
“Noho izany dia matoky tena be aho fa tsy hiverina amin'ny fotoana intsony fa handroso amin'ny fitomboana maharitra - na aiza na aiza.
"Ny sehatry ny fitsangatsanganana dia, tsy isalasalana, fa iray amin'ireo sehatra voakasik'izany indrindra vokatry ny COVID-19. Mampalahelo fa ny fitondram-panjakana tsirairay avy dia miasa samirery manao izay heveriny fa tsara indrindra hiarovana ny mponina ao aminy. Antenaina sy takatra izany. Ny fiainana no zava-dehibe indrindra tokony hanahirana. Manao izay fara heriny ny governemanta mba hiarovana ny olony.
“Ny firenena tsirairay avy dia tsy maintsy mandrindra ny asany sy ny fomba fanaony amin'ireo mpiara-monina aminy aloha. Ny fikafika dia ny tsy fanaovana asa lavorary samirery. Manaiky tokoa ny fomba fanao farafahakeliny manomboka amin'ny toerana manodidina izay hahatratra ny sehatra iraisam-pirenena. Tohizo ny famakian'i tsindrio amin'ny NEXT.